Забур 105 CARS - Nnwom 105 ASCB
1Ɛda Awurade ase na da ne kɛseyɛ adi.
2Monto dwom mma no, monto ayɛyie dwom mma no;
4Momma mo ani nna Awurade ne nʼahoɔden so;
5Monkae anwanwadeɛ a wayɛ
ne nsɛnkyerɛnneɛ, ne atemmuo a ɔbuiɛ,
6Ao Abraham mma, Onyankopɔn ɔsomfoɔ,
7Ɔyɛ Awurade, yɛn Onyankopɔn.
asɛm a ɔhyɛ maa awoɔ ntoantoasoɔ apem no,
9apam a ɔne Abraham yɛeɛ no
11Ɔkaa sɛ, “Mede Kanaan asase no bɛma wo
12Ɔkaa yei ɛberɛ a na wɔnnɔɔso,
13Wɔfirii aman so kɔɔ aman so;
wɔn enti, ɔkaa ahene anim sɛ:
16Ɔmaa ɛkɔm baa asase no so
na ɔsɛee akwan a wɔfa so nya wɔn aduane nyinaa;
18Wɔde mpokyerɛ guu ne nan,
na wɔde dadeɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn hyɛɛ ne kɔn,
19kɔsii sɛ deɛ ɔhyɛɛ ho nkɔm no baa mu,
kɔsii sɛ Awurade asɛm no daa no adi sɛ ɔyɛ nokwafoɔ.
20Afei, ɔhene no soma ma wɔkɔgyaa no;
aman no sodifoɔ gyaa no.
21Ɔyɛɛ no ne fiefoɔ so wura,
deɛ ɔwɔ nyinaa sodifoɔ,
22sɛ ɔnkyerɛ ne mmapɔmma deɛ ɔpɛ
na ɔnkyerɛ ne mpanimfoɔ nyansa.
23Afei, Israel kɔɔ Misraim;
24Awurade maa ne nkurɔfoɔ ase dɔreeɛ;
ɔyɛɛ wɔn bebree dodo maa wɔn atamfoɔ,
25wɔn a ɔdanee wɔn akoma sɛ wɔntane ne nkurɔfoɔ
na wɔmpam nʼasomfoɔ tiri so.
26Ɔsomaa ne ɔsomfoɔ Mose,
ne Aaron a na wayi noɔ no.
27Wɔyɛɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ nwanwasoɔ wɔ wɔn mu,
nʼanwanwadeɛ wɔ Ham asase so.
28Ɔsomaa esum, na ɔmaa asase duruu sum
ɛfiri sɛ na wɔate nʼasɛm no so atua.
29Ɔmaa wɔn nsuo nyinaa danee mogya,
nam so kumm emu mpataa.
na wɔhyɛnee ɔman no sodifoɔ mpia mu.
31Ɔkasaeɛ, na nwansena bebree
32Ɔmaa wɔn osutɔ danee ampariboɔ
na ɔbubuu ɔman no so nnua pasaa.
34Ɔkasaeɛ, na ntutummɛ baeɛ
mmɛbɛ a wɔntumi nkan wɔn;
35wɔwee nhahammono biara a ɛwɔ wɔn asase no so,
na wɔdii wɔn mfuo so nnuane.
36Afei ɔkunkumm wɔn asase so mmakan nyinaa,
wɔn mmarimayɛ mu aba a ɛdi ɛkan nyinaa.
37Ɔyii Israelfoɔ, a wɔso dwetɛ ne sikakɔkɔɔ,
firii wɔn mmusuakuo mu a obiara ho antɔ kyima.
38Misraim ani gyeeɛ ɛberɛ a wɔkɔeɛ,
ɛfiri sɛ na Israelfoɔ ho hu atɔ wɔn so.
39Ɔtrɛɛ omununkum mu kataa wɔn so,
na ɔde ogya maa wɔn, sɛ ɛnyɛ hann anadwo.
40Wɔbisaeɛ, na ɔbrɛɛ wɔn mmoko.
Ɔmaa ɔsoro aduane mee wɔn.
41Ɔbuee ɔbotan mu maa nsuo firii mu baeɛ;
na ɛtenee wɔ ɛserɛ no so sɛ asubɔnten.
42Ɔkaee ne bɔhyɛ kronkron bi a
ɔhyɛɛ ne ɔsomfoɔ Abraham no.
43Ɔyii ne nkurɔfoɔ maa wɔn ani gyeeɛ.
Wɔn a wapa wɔn no dii ahurisie;
na deɛ ebinom abrɛ anya no bɛyɛɛ wɔn agyapadeɛ
45na wɔahwɛ nʼahyɛdeɛ
Monyi Awurade ayɛ.
ASCB : Nnwom 105